အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Exchange Recovery v8.5
သင်ထည့်နိုင်သည် OST ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည် ရှာရန် button ကို OST ကွန်ပျူတာထဲမှာကူးပြောင်းမဲ့ဖိုင်တဖိုင်။
သင်အရင်းအမြစ်၏ Outlook ဗားရှင်းကိုသိလျှင် OST ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ဖိုင်ကိုပြီးရင်၎င်းကို combo box တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည် source file edit box ဘေးတွင် Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010 နှင့် Outlook 2013-2019 / Office 365. အမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ သင်ပုံစံကို "Auto Determined" အဖြစ်ထားခဲ့လျှင်၊ DataNumen Exchange Recovery အရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် OST ဖိုင်ကိုအလိုအလျှောက်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖိုင်။ သို့သော်ဤသည်အပိုဆောင်းအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
သင်ပြောင်းလဲထားသော PST ဖိုင်အမျိုးအစားကို combo box တွင်ရွေးချယ်နိုင်သည် ကူးယူထားသောဖိုင် edit box ဘေးတွင်၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပုံစံများမှာ Outlook 97-2002 နှင့် Outlook 2003-2019 / Office 365. ပုံစံကို "Auto Determined" အဖြစ်ထားခဲ့လျှင်၊ DataNumen Exchange Recovery local computer ပေါ်တွင် install လုပ်ထားသော Outlook နှင့်လိုက်ဖက်သော convert PST ဖိုင်ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen Exchange Recovery အလိုလိုtart ကိုအရင်းအမြစ်မှပြောင်းလဲ OST PST ဖိုင်ကိုဖိုင်။ တိုးတက်မှုဘား